Agaasimaha Arsenal Ivan Gazidis oo ka warbixiyay waxyaabaha ay ku doorteen in ay shaqaaleysiiyaan Unai Emery – Gool FM
(London) 23 Maajo 2018. Agaasimaha kooxda Arsenal Ivan Gazidis ayaa sheegay in kooxdiisa Gunners ay wada hadalo la yeelatay 8 macalin kale, kahor inta aysan dooran ninka reer Spain ee Unai Emery.
Arsenal ayaa shaacisay Unai Emery uu yahay macalinka cusub ee kooxda reer London si uu u noqdo badalka Arsene Wenger oo kooxda kusoo sugnaa mudo dhan 22 sano.
Shir jaraa’id uu qabtay Agaasimaha kooxda Arsenal Ivan Gazidis ayaa waxyaabihii uu ka hadlay waxaa soo xigtay wargeyska “Sun” ee dalka England.
“Waan ogahay inay tahay arrin la yaab leh, waxaan doonayaa inaan idin siiyo macluumaad asaasi ah, waxaan heysanay shuruud cad oo aan ku raadineyno, dabeecadeena ku haboon qiimaha Arsenal iyo horumarinta ciyaartoyda da’da yar”.
“Waxaan falaqeenay tababarayaasha, mana jirin shaqo soo jiidasho leh ee ku haboon tababarka kooxda Arsenal”.
“Waxaan heesanay liis dheer oo siddeed qof ah, waan wada sheekeysanay, cidna ma aysan ka soo bixin waxa ay tahay muhiimada”.
“Nasiib ayaan u yeelanay inaan doorano Unai Emery, wareysigii ugu horreeyay ee tababarayaasha wuxuu ahaa 25kii Abriil, kii ugu dambeeyayna wuxuu ahaa 15kii May waxaanu kulanay Unai Emery May 10”.
“Waxaan la socday xirfada Unai Emery tan iyo marka uu ku sugnaa kooxda Valencia, wuxuu leeyahay heer guuleed meel kasta uu u dhaqaaqo, kooxahiisa mar walba waa ay fiicnaadaan, wuxuuna ku haboon yahay heerarka aan sameynay”.
“Wareysiga Emery wuxuu ahaa mid cajiib ah si fiican ayuu u diyaarsanaa,, wuxuu ahaa waraysi aad uwanaagsan”.
“Jacaylka uu u qabo kubada cagta iyo rabitaankiisa inuu ku guuleysto wuxuu nala arkey isagoo taam ah, sababahan oo dhan, waan ku faraxsanahay inaan soo bandhigo Unai Emery”.
"Waxaan u socdaa Gurigeyga Cusub.". Andres Iniesta oo Xaqiijiyay Kooxdiisa Cusub